nightlife Archives | တစ်ဦးကရထား Save
ဥရောပ၏ရဲတိုက်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းသည့်လမ်းများနှင့်နေရာများသည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များဖြစ်လာကြသည်. ယနေ့အချိန်အထိဥရောပသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဓိကကျသောပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်ဘီစီဘွဲ့နှင့်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ပါတီပွဲများဖြစ်သည်…
တိုက်ရိုက်လွှဂီတနှင့်အတူဘားဥရောပမှာနေရာတိုင်းပေါ်လာ, အချိုရည်များနှင့်သီချင်းများအခမဲ့စီးဆင်းရာသွက်အရပ်ဌာန၌အချိန်ကိုသတ်မယ့်လမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့. သင်သည်သင်၏ရထားခရီးစဉ်အတွင်းမြို့ပေါ်မှာအချို့သောပျော်စရာရှိသည်ဖို့ရှာနေခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်အချို့သောအကြံပြုချက်များရရှိပါသည်. ဒီမှာပါ…